China Cable leposi mveliso kunye nabathengisi | Liyuan
Intambo ye-reel rack inokubizwa ngokuba yi-cable drum rack, ubukhulu becala iqulathe isakhelo, ibar yokuxhasa, iibracers njalo njalo.
Uyithengela phi iRack Rack Rack?
Ewe kumzi-mveliso waseLiyuan. Uyilo oluzimeleyo, lunokunceda abathengi basombulule iingxaki zokugcina. Ngokubhekisele kwimfuno eyahlukeneyo yabathengi, zininzi iintlobo zeerack reel racks ezinokuthi zikhethwe, ezinje nge-Selective racking ene-bar yenkxaso, "A" isakhelo sokurhangqa ngebhari yenkxaso, inkqubo ye-cantilever racking ene-bar yenkxaso. Kwaye siyakwazi ukuyila ii-racks zekhebula ezinokugcina kunye nokuqengqa intambo ngexesha elinye.
Izinto eziluhlaza yintsimbi ye-Q235B
Ingenziwa ngokwezifiso, umzekelo, uhlobo, ubungakanani, ukulayisha umthamo, amanqanaba, kunye nemibala
Ukusetyenziswa ngokubanzi ukugcina ikhebula, i-reel yentsimbi, i-cable reel, iidrama, njl.
Isakhiwo esilula, sikhuselekile kwaye silungele ukusebenza
Ikhethi yeCheel Reel ekhethiweyo
Olu hlobo lwentambo ye-reel rack ikakhulu iqulathe isakhelo, umqadi, ibha yenkxaso, ii-bracers zangasemva, imilo efanayo kunye nokuxhoma okukhethiweyo, kunye neyunithi enye yokuqalisa inokudibanisa uninzi lweeyunithi zokongeza. Rack ubungakanani, amanqanaba ungenziwa ngemfuneko malunga nobungakanani kweentambo kunye nobunzima.
Ulwakhiwo olulula, kulula ukufakelwa, ixabiso eliphantsi, kwaye linokuthwala i-500-2500KG kwinqanaba ngalinye
Isakhelo seRack Cable reel Rack
Izinto eziphambili zezi: Isakhelo, ibha yokudibanisa, kwaye ihlala ikwazi ukulayisha i-200-1000kg kwinqanaba ngalinye, enye yezibonelelo zizinzile.
ICantilever Cable Reel Rack
Le yindawo yokubeka umthwalo onzima, eboniswe ngohlobo lwecantilever, enokwahlulahlulwa ibe luhlobo lwengalo enye kunye nohlobo lwengalo kabini. Ihlala isetyenziselwa ukugcina iintambo ezinkulu kunye ezinzima, inokulayisha ngaphezulu kwama-2500kg kwinqanaba ngalinye.
Cable leposi kunye Ukunikela
Olu kuyilo lukhethekileyo lwe-rack reel rack lunokuhlangabezana nomsebenzi wokujikeleza ngelixa ugcina, oququzelela kakhulu iimfuno zabathengi.
1. Ukuyilwa kwesisombululo sobungcali kuyafumaneka
2. Kuza kwenziwa umzobo we-3D CAD
3. Iindidi ezahlukeneyo zerack cable zingakhethwa
4. Umgangatho ophezulu we-reel reel rack ngexabiso elikhuphisanayo
Egqithileyo Indawo yokugcina impahla iMezzanine Floor Steel Platform
Okulandelayo: Rock isiphekepheke
Ukugcinwa kwendawo yokugcina impahla Umsebenzi onzima wePallet
Umsebenzi ophakathi kunye noXanduva loMthwalo weCantilever
Ukugcinwa koGcino lwangaphakathi lweShelffu
Ukuxinana okuphezulu kweDrive ekuRacking kwindawo yokugcina izinto ...